जनता रैती, मालिक कि दास ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण जनता रैती, मालिक कि दास ?
लेख | दृष्टिकोण 17 views
जनता रैती, मालिक कि दास ?
रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र घरजग्गाको बेचबिखनले थेगिरहेको पानीको फोकाजस्तो खोक्रो जीवनशैली दिगो हुँदैन भन्ने सत्य हुँदै छ । हातको चरा होइन, झाडीको चराको खोजीले हामीलाई खाडी पु¥याएको इतिहास ३० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, दीर्घकालीन समाधान कसैसँग छैन । झाडी (वन)मा सिञ्चित पानी र हिमालको हिउँ पग्लेर पानी सित्तैंमा समुद्रमा मिसिएको छ तर हामी तेल किन्न खाडीमा काम गर्दै छौं । चूल्हो बाल्ने ग्यास, नेपालमा छुट्टी आउँदा चढ्ने मोटरसाइकल र गाडीका लागि चाहिने इन्धनमा विप्रेषण उडिरहेको छ र भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गरिएको छ । सबैको सोचमा उकालो, उरालो, भिरालो जग्गाको बसाइलाई त्यागी समथर र घनाबस्तीमा घरघडेरी जोड्नु नै आर्थिक सुरक्षा वा दीर्घकालीन समाधान भएको महसूस गरिएको छ । किनकि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हालको नीति नै छ, सडक र घना बस्तीको जग्गा मात्र मापदण्डमा पर्छन् । यी संस्थाले पनि यसैलाई धितो मान्छन्, भावनात्मक रूपमा आम नागरिक बाध्य छन्, दुःखको पैसा हावामा उडाउन ।
एकपटक तेल र ग्यासका निर्यातकर्ता अरब तथा अफ्रिकी मुलुकको चर्चा गरौं । खेतीपाती गर्न नसकिने मरूभूमिमा तेल र ग्यासको थोक र खुद्रा विक्रीका साथै निर्यात गरी त्यो मुलुकको जीवनस्तर मात्रै उकासेको छैन, हाम्रालाई पनि रोजगार दिएका छन् । साउदीबाट केही कामदार मात्र फिर्ता हुँदा मुलुकमा आर्थिक सङ्कट लुकाउनै नसक्ने गरी उदाङ्गो भइसकेको छ । विप्रेषण भित्र्याउने प्रभु मनी ट्रान्सफर र आईएमई अहिले सफल र वित्तीय संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको कसैबाट लुकेको छैन । यहाँबाट थाहा हुन्छ, देश कसरी चलिरहेछ र जनताको शक्ति कति रहेछ ?
चिया पसल होस् या भट्टी, अफिस होस् या खुला चौर, विकासको शीर्षकमा छलफल शुरू गर्‍यो भने यस्तो भान हुन्छ कि सबैलाई थाहा छ, मुलुक कसरी सभ्य र समुन्नत हुन्छ । तर्कको बैङ्क नै छ सबैसँग तर एक इञ्च पनि मुलुकले किन गति लिएको छैन ? पृथ्वी राजमार्ग चीनले, महेन्द्र राजमार्ग भारतले बनायो तर हाम्रोमा ती राजमार्गको स्तरोन्नति त के पुरानो स्तरलाई कायम राख्न र बेलाबेलामा आएको बाढीपहिरोले भत्काएको बाटो र पुल पनि पुनर्निर्माण समयमा हुन सक्दैन, भए पनि पुरानै स्तरमा हुन सक्दैन । जनताको करले चर्चा गर्नलायकको के संरचना बन्यो ?
प्रशस्त खोलानाला नभएको मुलुक साउदी अरबले पानी शुद्धीकरण र सौर्य ऊर्जालाई जोड दिएको छ । सौर्य ऊर्जालाई अझै प्रभावकारी बनाउन संसारभरि नै अभ्यास भइरहेको छ । सौर्य पाताको अनुसन्धान र विकासमा प्रतिस्पर्धा नै छ । शङ्का छैन, एक दिन सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली संसारमै सस्तो हुनेछ । हामी भने सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गरिरहेका छौं । ठीक छ, अधिकतम ५ घण्टा प्रतिदिन नै औसत उर्जा उत्पादन गर्छ भन्ने मान्यता राखौ, त्यो ५ घण्टा त कुलेखानीमा पानी सञ्चित भयो, बरू यस्तै आयोजना एक दुईओटा तुरून्त बढाउने प्रयास गरौं । एकोहोरो सौर्य ऊर्जा महँगो छ, २४सै घण्टा उत्पादन हुँदैन भन्दै यो प्रणाली नै गलत हो भन्ने रट लगाइएको छ, जुन सरासर गलत हो ।
सौर्य ऊर्जाको गलत प्रयोग भएको छ । सडक बत्ती, हाइवे, दोहोरो सवारीसाधन चल्ने सडक वा फराकिलो सडकमा उपयुक्त हुन्छ, उदाहरणका लागि बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मका बत्तीहरू ठीक छन् । जडित सोलर पाताहरू तालिका बनाएर नै नियमित रूपमा सफा गरिनुपर्छ । हाम्रोमा शहरभित्र छ, त्यो पनि घर तथा रूखको छाया पर्ने ठाउँमा । शहरभित्रका फराकिला सडकहरूमा दुवैतर्फ निश्चित दूरीमा रूखहरू हुनुपर्छ र रूखहरू भएको ठाउमा सोलरबत्ती राखिँदैन, ग्रीडकै बत्ती आवश्यक छ । एकपटक विकसित मुलुक घुमेकाहरूले त्यो क्षेत्रको याद गर्नुहोस्, चाहिँदैन हामीलाई हरियाली र स्वच्छ पर्यावरण ? मिश्रित ऊर्जा प्रणालीलाई अपनाउन सके हामी ऊर्जामा छिटोभन्दा छिटो आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । उचित पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट (पीपीए) दर र रूख बिरुवा उम्रन नसक्ने मुडुला डाँडा दिएर त्यसको वरिपरि सबस्टेशन बनाइदिए पुग्छ ।
चिनियाँहरू लगानी गर्न ओइरिरहेका छन् । पीपीए दर भारतसँग दाँजेर हलो अड्काउने काम गरिनु हुँदैन । भारतमा गिगावाटको योजना छ र जमीन पनि प्रदान गर्ने भएकाले पीपीए दर कम छ । स्थान अभावका कारण हामी गिगावाटमा जान सक्दैनौं । चीन र अरू मुलुक त चर्चा नै नगरौं, सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धनकै लागि पनि सौर्यऊर्जा परियोजनालाई उचित पीपीए मूल्यका साथै अनुदान दिइएको हुन्छ । दुःखको कुरा के छ सौर्य ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जाको संज्ञा दिएर ऊर्जाको स्रोत हो भन्ने प्रमाणित गर्ने मौका नै नदिनु हो । यसलाई कुल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशतमा सीमित गरिनु हुँदैन, गरिनु ठूलो षड्यन्त्र हो । भारतबाट अहिले खरीद गरेको बिजुलीको मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्न टाउको दुखाइ किन ? बिजुलीबाट सस्तोमा खाना बनाउन पाए सिलिण्डर थुपारेर राख्ने बाध्यता स्वतः हट्छ । बिजुली बढी हुने विषय नै होइन, भयो भने नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी एलपीजी ग्यासको कम आयात गरे हुँदैन ?
प्राणीलाई बाँच्न खाना चाहिन्छ, देश बाँच्न ऊर्जा चाहिन्छ । विद्युत् (बिजुली), तेल(इन्धन), ग्यास, कोइला, यूरेनियम इत्यादि ऊर्जा र ऊर्जाका स्रोत हुन् । यी स्रोत नहुने हो भने यो दुनियाँ विकसित र अविकसित मुलुकमा विभाजित हुने थिएन । विकसित मुलुक पर्यावरणको वास्ता गर्दै ऊर्जा सञ्चय गर्छन् । हाम्रो मुलुकमा जे पनि फेशन बन्नुपर्छ । तातो र चिसो (हिटिङ र कुलिङ) प्रणाली हाम्रो प्राथमिकतामा परेको नै छैन । गर्मीमा झ्याल खोल्ने धूलो खाने र जाडोमा विद्युतीय हिटर चलाउनेसम्ममा पुगेका छौं । हरेक घरले एचभीएसी (हिटिङ भेण्टिलेशन एण्ड एअर कण्डिशनिङ) सिष्टम जडान गरेपछि फेरि त्यो एकस्तर बन्छ र फेशन बन्छ । टाढा जानु पर्दैन, हाम्रो मुलुकका सम्भ्रान्त परिवारको घरमा कोरियामा काम गर्ने कामदारले जत्तिको न्यानो घरमा बस्ने हैसियत पनि छैन । एचभीएसी सिष्टम ठट्टा होइन । पाँचतारे होटलसम्ममा त्यो अनुभव गर्न पाइन्छ, बिजुली नहुँदा जेनेरेटरलाई प्रयोगमा ल्याउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई नै शेयरहोल्डर बनाएर योग्यताअनुसारको सरकारी रोजगारी प्रदान गरी विद्युत् आयोजना बनाउन सक्छ । बैङ्क, लघुवित्त र सहकारी हुँदैमा सम्पन्नता आउँदैन, जनतालाई आम्दानीको सुनिश्चितता दिनु अपरिहार्य छ । सहकारीलाई लगानीको ग्यारेण्टी गरेर जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न दिइनुपर्छ । के गुणस्तरीय जीवन बिताउन नेपाली नागरिक भएर भारतीय र अङ्ग्रेज सैनिक, सिङ्गापुर पुलिसमा भर्ती हुनैपर्ने हो ? अनि मात्र हामी भाग्यमानी नेपाली नागरिक हुने हो ?
कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धन हुन पनि ऊर्जा नै चाहिन्छ । विद्युत् नहुँदा कति दुग्ध प्रशोधन केन्द्र प्रभावित भए । उखु उत्पादनपश्चात् चिनी त बनाउनैपर्‍यो । यातायातको व्यवस्थापन हुन सकेन भने पर्यटन फस्टाउँदैन । जापान, कोरिया र चीनको चर्चा गर्नु जरुरी छैन, भारतको दिल्लीमा कत्रो सकस हुन्थ्यो यदि मेट्रो अहिलेसम्म चल्दैनथ्यो भने । सस्तो, सुरक्षित, छिटो, भरपर्दो भएको छ मेट्रो रेल, हामी भने माइक्रो र मिनीबसमा सहचालकको हप्की खाँदै छौं । ऊर्जा, कृषि र पर्यटनलाई उद्योगमा परिणत गर्ने हस्तीहरूलाई सस्तो दरमा ऋण प्रदान गर्दै सरकारले हौसला दिनु अपरिहार्य छ । राजनीति गर्ने नेताहरू पनि उद्यमी हुनु अनिवार्य छ नत्र पीडा बुझेर आवश्यक नीति बनाउने कसले ?
मुलुक बनाउने दायित्व सबैको हो । तर, अभिभावकहरूको इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने क्षमताले मात्र सकारात्मक नतीजा आउँछ, जनता त ‘होस्टेमा हैंसे’ गर्ने सदस्य मात्र नै हुन् । अमूल्य खजानामाथि सुतेर माग्दै मुलुक चलाउन पर्ने भनेर परिचय बनएको मुलुकको सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको खोटो भाग्यलाई परिवर्तन गरी गुणस्तरीय जीवन दिन सक्ने, जात, धर्म, गुट, पार्टी, आफन्त, परिवार विशेषको मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकको परिचय बदल्ने सक्ने गरी पशुपतिनाथले एक मानव (नेपाल आमाको छोरा)मा मानवकै गिदी प्रदान गरून् ।
लेखक ऊर्जा विज्ञ हुन् ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका आयाम
१० असार २०७५, आईतवार ०६:५५
वामपन्थी सरकारसँग तर्सेको शेयरबजार
१० असार २०७५, आईतवार ०६:५०
पूँजीगत लाभकर र उपयुक्त विधि
१० असार २०७५, आईतवार ०६:४५
रेल कि सडक
१० असार २०७५, आईतवार ०६:४१